Aabayaasha oo dagaal ugu jira masuuliyada caruurtooda | Somaliska
Waalidiinta isku qabsata masuuliyada caruurta ayaa soo siyaadaya sida lagu soo bandhigay warbixin ay qortay idaacada Sweden. Marka ay kala tagaan aabaha iyo hooyada ayaa masuuliyada caruurta waxaa la siiyaa hooyada, balse waxaa hada soo kordhay aabayaasha diidan in ay ka haraan caruurtooda. Dowlada ayaa isbedal ku samaysay nidaamka masuuliyada caruurta sanadkii 2006 kaasoo lagu go'aamiyay in labada waalid midka lagula kacay gacan ka hadalka uu qaadanayo masuuliyada caruurta. Waxaa go'aanku ahaa in danka ilmaha laga hormariyo tan waalidka. Taasoo inta badan keenta in hooyada si gooni ah loo siiyo masuuliyada caruurta. Xarunta familada ee Göteborg ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhacaan dacwada u dhaxaysa waalidinta isku haysata caruurta. Shaqaalaha xarunta ayaa sheegay in ay labo jibaar noqotay dacwooyinka ay helayaan ee ay sameynayaan aabayaasha doonaya in ay qeybtooda ka qaataan masuuliyada caruurtooda. Haddii xaruntu ay xalin weydo qilaafka ayaa arinta waxaa loo dirayaa maxkamada taasoo aan u wanaagsaneyn danta caruurta. Sanadkasta ayaa Sweden waxaa kala tagga waalidku ay saameyn ku yeelataa 50 000 caruur ah. Warbixinta ayaa ku saabsan guud bulshada Sweden balse si gooni ah haddii loo eego xaalada Soomaalida ayay inta badan dhacdaa in hooyada la siiyo caruurta marka uu qilaaf dhex maro aabaha.
Waalidiinta isku qabsata masuuliyada caruurta ayaa soo siyaadaya sida lagu soo bandhigay warbixin ay qortay idaacada Sweden. Marka ay kala tagaan aabaha iyo hooyada ayaa masuuliyada caruurta waxaa la siiyaa hooyada, balse waxaa hada soo kordhay aabayaasha diidan in ay ka haraan caruurtooda.
Dowlada ayaa isbedal ku samaysay nidaamka masuuliyada caruurta sanadkii 2006 kaasoo lagu go’aamiyay in labada waalid midka lagula kacay gacan ka hadalka uu qaadanayo masuuliyada caruurta. Waxaa go’aanku ahaa in danka ilmaha laga hormariyo tan waalidka. Taasoo inta badan keenta in hooyada si gooni ah loo siiyo masuuliyada caruurta.
Xarunta familada ee Göteborg ayaa ka mid ah goobaha ay ka dhacaan dacwada u dhaxaysa waalidinta isku haysata caruurta. Shaqaalaha xarunta ayaa sheegay in ay labo jibaar noqotay dacwooyinka ay helayaan ee ay sameynayaan aabayaasha doonaya in ay qeybtooda ka qaataan masuuliyada caruurtooda. Haddii xaruntu ay xalin weydo qilaafka ayaa arinta waxaa loo dirayaa maxkamada taasoo aan u wanaagsaneyn danta caruurta.
Sanadkasta ayaa Sweden waxaa kala tagga waalidku ay saameyn ku yeelataa 50 000 caruur ah. Warbixinta ayaa ku saabsan guud bulshada Sweden balse si gooni ah haddii loo eego xaalada Soomaalida ayay inta badan dhacdaa in hooyada la siiyo caruurta marka uu qilaaf dhex maro aabaha.
Asmc. Bacda salaam, Anigu waxaan qabaa in ay Hooyooyinku xaq uleeyihiin xanaanayta caruurta xitaa haday Aabaha kalatagaan ilaa hooyo aan alkolista ahayn waloow ayba yaryihiin, Ama aan xaga diinta kufiicnayan haddaan Soomalideena kahadlaayo.Waayo ilma kastaa qofkuu aduunka ugufarxad badanyahay waa Hooyadiis. Kalatagu wax macne ah ma samaynayo ilaa in uu dhib uyahay midkasta oo qoyska kamidah mooyee Mana fiicna hadaan xalkale lawaayin!
“Sorry ilaa hooyo Aalkoliste ah mooyee” ayaan kawaday ee iga raali ahaada!
Kuma faraxsani in ilo yar hooyo la,aan la dhigo ama aabo la,aan balse daryeelka markasta waxa u fiicaan hooyadaa… dhibkana waxa keenay gaada oo raba in aay hadhow dhahan kama soo bixi kartid masuuliyda ilmaha .. yab ma qof ba,a jira wuxu dhalay neceb caajiib ilmaha islaanimada ayay kala dagalamyan ee dan aay kaleyihin ayaba iska yar waxay kabaqayan qof islaama oo luqadooda yaqan wadankoodkooda ku koray
Asc/dhaman? Walala,yal,waxan idin weydiyay, dadka ogolanshada,lasiyay wili ya arkay dad pasaporadi lasiyay wan arkay dad ogolansho lasiyay o karki soqatay lkn wili man arag dad pasapor lasiyay cida araktay fadlan hanososhekto ayado mahadsan
JIMCAALAAN QUUS KA TAAGANAHEY says:
Asc jimcaalow kamuunadii ayaa lacag dalbadey war farxad leh inaad ciwaan kaso dhigto iyo wax aan qiimo laheyn intaad waqti iskaga lumin laheyd waxanu ka codsaneynaa in aad xiriiro la sameyso dowlada si aan u ogaano halka ay wax marayaan hana nagu dhibsan mararka qaar hadalada aqristayasha kasoo yeera waayo adiga ayaa ku haysana waqtigaaga qaaliga ahna ku hurey inaad umada dhibaateysan la qeybsato dhibka marka noosoo jawaab oo warar aanu qalbiga ku qaboojisano nooga soo diyaari adigoo raadinaayo inad wareysato dowlada ogowna waxaad walaalahaga dhibaateysan u qabato in allaah kaa jizo siinaayo wallaal wadna mahadsan tahey in badan oo kaasoo horeeyey in badan oo kaa dambeeyeyba waad ka sareysaa waayo wax badan ayaa noo iftiimisay wabillaahi towfiiq
iimataal iima iima heysid, aniga miyaa kir kac kaa mudan says:
iswidhishka ayaa go’aan leh kkkkkk hadii ay hooyada siinayaan iyo hadii ay aabaha siinayaan,
adinka cod ma lihidiin.
kaliya waxaad ka tihiin daawadayaal.
samira cabdi says:
asc dhamaan walalaha qorbado raga iyo dumarka somaliyeed wa istustahay tas wa xaqiiq caruurtina dhexdoodey ku dhoomen walidinta somaliyeed wan ay waxkasta carurta ka horemariyaan hadikale caruuto dur geylayaan ama gala qadaneysa
WADASALAMADIHIN IQAARTA WA SAX ISWIDHISHKA GO’AAN KA LISKALEY
August 18, 2012 at 12:33
walaal waxaan idin leeyahay aabayaasha la sheegayo waa kuwa daneeya caruurtooda ee waxkasta ka hormarinaya. lkn dadkan soo qoraya gaaladu muslinimo ayey u jeedaa dee muslim ma leh wadanka cidda majorati ah baana laga hadlayaa. ragga soomaaliyeed lagama hadlaayo. midkale raga soomaalida ubadkooda maba daneeyaan hadii ay gabadha kala tagaan markaasbuu noqdaa nin shisheeye. kuwa wadankii joogaa xataa biilka yar wayka goostaan. bal muxuu sameeyey ilmaha yar ee saqiirka illahay ba kala xisaabtami. anigu waxaan leeyahay ninka u doodaya masuuliyada ilmihiisa waa aabo u qalma aabanimo oo in la qadariyo mudan